Jaceykaga Nagu Weyn (Dhamaad) - QeyloNET Somali Media Portal
Jaceykaga Nagu Weyn waa musalsal aad u xiiso badan oo aad ka daawan kartid qeylonet.com. Musalsalkaan oo xambaarsan sheeko jaceyl, farxad iyo murugo. Welibana aad uxiisa badan waxaad goordhow asagoo dhameystiran ka daawan kartaa qeylo.net
JNW Xalqada 95
JNW Xalqada 94
JNW Xalqada 93
JNW Xalqada 92
JNW Xalqada 91
JNW Xalqada 90
JNW Xalqada 89
JNW Xalqada 88
JNW Xalqada 87
JNW Xalqada 86
JNW Xalqada 85
JNW Xalqada 84
Wll nosodaya musalsal ka qofuu lunsaday cashaqa
Plz kaas nosogaliyaa
Waa ku xisay
Waan ka heley
Sidee lo badala qualatiga isheeg adigo raliah
10min ayaa sogey liva wax isbdal ku ma arko
Xalqadee waaye taas. Ii sheeg hal xalqo oo live ah aan kaa check gareeyee
Wll musalsal kaan qaybaha an shaqeynayn wuxu leyahay waa live marka plz cadi ka dhiga
Haddii aad arakto LIVE cilad maahan ee video ayaa automatic isku saxaayo so sug ilaa 5 daqiiqo kadib caadi ayaad u daawan kartaa. Mahadsanid
Walal nasoo kili video adoo sameyneysid waa codsi
Quality adoo sameyneysid plz
Walalyalow musalsalka jeceyl qurjo tagey noso daaya hadad heli kartaan
8 iyo 16 17 mashaqanayo
ciladaas aya arkay sidaas lasocda
ok hadda waa daawan kartaa. haddii video uu kuu shaqeyn waayo bedel qualitiga ko ama hoos u celi
Wlaalayalow mashaqeynaayo musalsalka jacrylkagaa nagu Weyn
haddii video uu kuu shaqeyn waayo bedel qualitiga ko ama hoos u celi
Musalsalkan maxaa ka qaldan xaqada kowad Bas ayaa la ga firsankaraa
Sidee quality u badala noo sheka wallo wxn ma shaqeynayo
Videoga shid, markuu shidmo pause sii ama markuu wareeganaayo fiiri qeybta hoose ee control bar-ka videoga ama meesha laga weyneynaayo Waxaa ku yaaalo icon yar oo wareeg ah, ku dhufo ka dib waxaad arkeysaa 720 ama 360, labadda haddii mid kuu shaqeyn waayo mid ka kale tijaabi, waa qasab mid ayuu qadkaada ku shaqeyn karaa.